ဦးခင်ရွှေပေးသမျှ ယူတာယူ မဲထည့်ရင်သာ NLD ကို မဲထည့်
‘‘ဒီမှာအားလုံးရှိတုန်း၊ သတင်းထောက်တွေလည်းရှိတုန်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောပါမယ်…
ဦးခင်ရွှေပေးသမျှ ယူတာယူ မဲထည့်ရင်သာ NLD ကို မဲထည့်’’
7Day News မှာတော့ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီလ်ိုပါလာတယ်…
တကယ်ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာထက် ဒေါ်စုက အဲ့လိုမျိုး ပြောတယ်ဆိုရင် ကျုပ်လေ ဒေါ်စုစကားကို ၁၀၀% ကျော်တဲ့အထိ ထောက်ခံတယ်ဆိုတာပဲ!
ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေဆိုတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကော့မှုးမြို့နယ်ရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အနိုင်ရထားတာ…
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်မှာ ဒေါ်စုက ကော့မှုးမြို့နယ်ကနေ ဝင်ပြိုင်တော့ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရထားပေမဲ့ လာမဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်မှာ ထပ်ပြီး အနိုင်ရဖို့ အရေးကြီးတယ်…
ဦးခင်ရွှေကို အခုလက်ရှိ ကော့မှုးမြို့နယ်မှာ လူမှုရေးကူညီမှုတွေ လုပ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့က ဦးခင်ရွှေဆီက ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေအကူအညီလ်ိုအပ်ကြောင်းကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကိစ္စကို ဒေါ်စုက ခွင့်ပြုပေးထားတာပါ…
ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေက ချေးငွေလေး ၅သောင်းထုတ်ချေးတာကို ကျေးဇူးရှင်အမှတ်နဲ့ မဲတပြားပါ ရက်ရက်ရောရော ပေးတတ်ကြတာမျိုးလေ!
ဒါတွေကို ဒေါ်စုက သ်ိပြီးသား!
ဒါကြောင့် ဒီလိုအချိန်မှာ နားဝင်ချိုဖ်ို့ထက် ဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်ပြောမှ နားထဲအလုံးလိုက်ဝင်တော့မှာပေါ့!
ဒေါ်စုရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်တဲ့ ကော့မှုးမြို့နယ်ရဲ့ လူမှုရေးအဖွဲ့လေးကို ငွေကြေးထောက်ပံ့နေရလို့ ခရိုနီကြီးက စည်းရုံးသိမ်းသွင်းမှုတွေ မလုပ်ခင်
ကျုပ်သဘောကတော့ ဦးခင်ရွှေဆီမှ မဟုတ်ဘူး!
ဖွတ်ပါတီက ဘယ်ဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ခရိုနီဖြစ်ဖြစ် ငွေချေးပြီးမဲထည့်ခိုင်းလည်း ငွေသာယူ မဲထည့်ရင် NLD ကိုထည့်!
အချိန်တန် မဲထည့်ရင် NLD ကိုထည့်!
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/29/20150အကြံပြုခြင်း
အစိုးရဖက်ကို မမေးထားဘူးဆိုလို့ 
အစိုးရဖက်ကို မမေးထားဘူး... တပ်ဖက်ကို မမေးထားဘူး...
ဆိုတဲ့စကားတွေက သတင်းပါလာပြီးနောက်မှာ ပြသနာဖြစ်လေ့ရှိတယ်။
မေးပေမယ့် ရှောင်လွှဲတာတွေ... မဖြေတာတွေ... ဟိုလွှဲဒီလွှဲလုပ်တာတွေကို
ဘယ်သူမှ မသိဘူး ... တစ်ခါတလေ တိုက်ပွဲတစ်ခုခု သတင်းဆိုပါစို့ ...
သတင်းထောက်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖက်ကို မေးတယ်...
ဟိုဖက်က တိုက်ပွဲအခြေအနေ အဖြစ်အပျက် အကျအဆုံးဖြေလိုက်တယ်...
တပ်ဖက်ကို ထပ်မေးတော့ ဟိုလွှဲဒီလွှဲနဲ့ စကားတစ်ခွန်းထွက်လာဖို့ အတော်ခက်တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီသတင်းပါလာတဲ့အခါ... ဒီမီဒီယာဟာ သူပုန်ဖက်ကိုလိုက်ရေးတယ်...
သူပုန်ပြောသမျှရေးတယ်ဆိုပြီး ... တပ်ဖက်က အခဲမကျေဖြစ်လေ့ရှိကြတယ်။
သေချာတာတစ်ခုကတော့ အတိုက်အခံတွေအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်
အဖွဲ့တွေတော်တော်များများဟာ မီဒီယာနဲ့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ် ဘယ်လိုအသုံးချရမယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ကြတယ်။
မြန်မာအစိုးရဌာနများအပါအ၀င် တပ်မတော်ဖက်က သတင်းဖြေကြားမှုနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စေချင်ပါပြီလို့ ... ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/28/20150အကြံပြုခြင်း
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကြီးကို သာ မဲပေးလိုက်ပါ
မိဘပြည်သူများ ခင်ဗျား ... အစချီကာ ပြောချင်ရာပြော။ ပြီးရင် လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ တစ်လတစ်ခါ လာတဲ့ အသံကို မေ့မရအောင် သင်စွဲလမ်းနေပါသလား?
အို .... ဘယ်လို အဆိုးမျိုးပဲ ကြုံချင် ကြုံချင် ...
"ဘာပဲလိုလို ... ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှာရှိတယ်"
အမှတ်(၂)စစ်ဆေးရုံက အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှအောင်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/21/20150အကြံပြုခြင်း
ကြံ့ဖွတ် ဘောင်းဘီဝတ်/ချွတ်အစိုးရရဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးထောက်ပံ့မှု အခြေအနေ....
မနေ့က အန်တီစုအိမ်ကို သွားတွေ့ခွင့်ရလိုက်တယ်။
ကျွန်တော် သိပ်လေးစားရတဲ့ သူ့ကို ကန်တော့ခွင့်ရလိုက်တယ်။
ဘဝမှာ အလုပ်ချင်ဆုံးအရာတစ်ခုကို လုပ်ခွင့်ရလိုက်လို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
ပြီးတော့ သူ့ဧည့်ခန်းမှာ သူ့အနားက ခုံမှာ ထိုင်ရင်း
မိနစ် ၃၀ ကျော်လောက် စကားပြောခွင့်လည်း ရလိုက်တယ်။
တကယ်တော့ အန်တီစုကချည်းပဲ ပြောသွားတာပါ။
ကိုယ့်မှာလည်း မေးချင်တာတွေ၊ ပြောချင်တာတွေများလှပေမယ့်
အန်တီစုကိုကြည့်ရတာ ပြောချင်ရက်နဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် အပြင်မှာ ပြောလို့မရဘဲ
အောင့်အည်းထားရတာတွေကို ပြောချင်ပုံရတာကြောင့် သူပြောတာတွေပဲ နားထောင်လာခဲ့ပါတယ်။
အန်တီစုရဲ့ စကားတွေထဲက အခုလက်ရှိ ရှေ့မတိုးနိုင်ဖြစ်နေတဲ့
အန်တီထပ်ကာတလဲလဲ မှာကြားလိုက်တဲ့ သူအဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒကို
တဘက်က အန်တီစုကို "ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုး" ဆိုပြီး
တောက်လျှောက် စော်ကားလာခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရဟာ
တိုင်းတပါးက လော်ဘီအဖွဲ့ကို ငွေနဲ့ပေါက် ငှါးရမ်းလိုက်သလို၊
လူထုကိုလည်း ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး မဲဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
အခြား တဘက်ကလည်း ဒီအွန်လိုင်းကွန်ရက်ရဲ့ စွမ်းအားကိုသိလို့
လခစား ကီးဘုတ်စစ်သားတွေ မွေးလိုမွေး
လူထုကို အန်တီစုနဲ့ သွေးခွဲ၊ သူတို့ကို ကြည်ညိုလာအောင် အမျိုးမျိုး စည်းရုံး လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။
ဒီတော့ ချို့တဲ့တဲ့ အန်တီစုတို့ NLD ပါတီအတွက်
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီးအချိန်ကုန်ခံ လူပန်းခံပြီး
စည်းရုံးပေးမယ်လို့ ဟိုအရင်ကတည်းက ဆုံးဖြတ်ထားသူမို့
ခုလိုအန်တီစု ကိုယ်တိုင်က ပြောလာတော့
သူငယ်ချင်းတို့လည်း ဒီကနေ့ကစလို့ နီးစပ်ရာတွေကို စည်းရုံးပေးကြပါ။
ဒီအွန်လိုင်းက Facebook လို နွားခြေရာကွက်ကလေး ကတဆင့်
ဒို့စည်းရုံးတော့ရော နှမ်းတလုံးနဲ့တော့ ဆီမဖြစ်ပါဘူးလို့ အားမလျှော့စေချင်ဘူး။
ဘီလုံးငှက်ငယ်ဟာ အနိုင်ကျင့်စော်ကားတဲ့ သိန်းစွန်ကို
နွားခြေရာကွက်ကလေး ထဲကနေ အနိုင်ယူသွားသလို၊
အနိုင်ကျင့်စော်ကားတဲ့ သိန်းစွန်နဲ့တူတဲ့ သိန်းစိန်တို့ ပါတီကို
ဘီလုံးငှက်ငယ် နဲ့တူတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားနည်းတဲ့ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူတွေက
နွားခြေရာကွက်နဲ့တူတဲ့ ဒီ Facebook ပေါ်ကနေ
ဒါမှမဟုတ် အခြားသော လူမှုကွန်ရက်တွေ မီဒီယာတွေ၊
ကိုယ့်ဘက်သားတွေ အမြင်ကျယ်အောင်၊ စည်းလုံးအောင် စည်းရုံးပြီး
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အန်တီစုနဲ့ NLD ပါတီ
အပြတ်အသတ်အောင်ပွဲခံနိုင်အောင် ကူညီပြီး တစ်ဘဝလုံးကို
အမှတ်(၂)စစ်ဆေးရုံက အရိုးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူ ...
ကြံ့ဖွတ် ဘောင်းဘီဝတ်/ချွတ်အစိုးရရဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးေ...